Sukuthumela iziQendu zoSapho lwam (ezihlekisayo kunye noqobo) - Okunye
Sukuthumela iziQendu zoSapho lwam (ezihlekisayo kunye noqobo)
Okwantlandlolo ungangcolisi kunye nezicaphuno zosapho lwam kunokuhlekisa kwaye kuhambise isilumkiso. Izicatshulwa malunga nokungadibanisi nosapho lomntu zenza abanye abantu bazi ukuba lubaluleke kangakanani usapho lwakho kuwe.
Ukuhlekisa Musa ukuThumela iiNqaku zoSapho lwam
Ungasebenzisa isicatshulwa esihlekisayo malunga nokuba ungadibanisi nosapho lwam ukuhambisa isilumkiso sentliziyo elula. Inokwenziwa ngesiqhulo, kodwa umyalezo wakho uya kuviwa ngokucacileyo kwaye uqondwe nangubani na onokubangcungcuthekisa okanye umntu okhohlakeleyo.
Xa kuziwa ekuphambaneni nodadewethu ongumntwana, unokucinga ukuba sisiqhamo nje esijingayo. Dibana nesiqhamo esikhulu, esiphakamileyo esijingayo esimkhuselayo.
Xa kufikwa ekuxakaniseni nosapho lwam, akukho sizathu.
Ubize umnakwethu omncinci ukuba abe likhonkco elibuthathaka kwikhonkco losapho. Dibana nelinki enkulu yosapho.
Xa ubize umzalwana wam nge-chip kwibhloko endala, ndiyazi ukuba kufanele ukuba yayiyinto yokuncoma ukubona ukuba ungoyinto encinci kangakanani.
Ewe, kufuneka ndivume ukuba umntakwethu unobuso kuphela obunokuthandwa ngumama. Laa mama kwenzeka ukuba ngowakho.
Kutheni ewe, kusapho lwethu sinomthetho wethu wegolide -fumana nokuba uziphindezele.
Ama-40 amaNqaku oMama aMnandi ahlekisayo ongenakulibaleka
Iingcaphuno zentsapho yesibini
Intlungu Yosapho Lwam kwaye Ndizakukwenzakalisa
Ukuphendula ngolwimi esidleleni kumntu ofuna ukukhathaza usapho lwakho kunokusasaza iimvakalelo. Zama isicatshulwa ngoncumo oluncinci olungalindelekanga ukukhawulezisa izixhobo nangayiphi na intshaba.
Xa udibene nosapho lwam, andinakukunceda kodwa ndicinge ukuba ungamafry nje ambalwa kukutya okumnandi.
Zintathu izinto ongadibani nazo, ukutya kwam, imoto yam kunye nosapho lwam.
Musa ukuzixakekisa nge-5'3 'elivisayo eklasini kuba umntakwabo u-6'5' uyamthatha esikolweni.
Akukho mntu uthetha nodadewethu ngaloo ndlela. Ingaba ucinga Ungubani? Mna?
Ilizwi kwizilumko, sukuzixakekisa nosapho lwam. Abanawo uburharha.
Ndiyakucela ukuba ungadibanisi nosapho lwam. Badidekile ngokwaneleyo njengoko injalo.
Sukuthumela kunye neeTata zikaTata wam
Ewe utata wakho angakhathala nabani na omoyikisayo, kodwa uyafuna ukumthethelela. Izicatshulwa ezimbalwa zingabonisa indlela oziva ngayo xa umntu othile ezama ukungcolisa notata wakho.
Ngubani owenza i-virgos ahlangane
Ipharadesi yesidenge kulapho uya kuzifumana emva kokuxakana notata.
Ngaphambi kokuba udibane notata, ndinyanzelekile ukuba ndikwazise ukuba angatsiba izakhiwo ezide kunye nezinto.
Umntu wokugqibela oxubene notata wam wafunda intsingiselo yento abazali umkile endle .
Ngaphambi kokuba uthethe into ngotata wam, khumbula nje, umlomo ovaliweyo awuqokeleli iinyawo.
Phambi kokuba udibane notata, ndikunika uDaniel eze kumzuzu womgwebo.
Sukuthetha noMama wam
Umama wakhongumntu okhethekileyo, akukho mntu unokuphinda adibane naye. Ukuhlekisa okuncinci kunokubakhumbuza abantu ukuba nabo banomama kwaye kubenze bacinge kabini ngaphambi kokuba benze iimvakalelo ezingalunganga.
Ngaphambi kokuba udibanise nomama, kufuneka ndibuze ukuba uyayazi na intetho, Uhambo lweekhilomitha eziliwaka luqala ngenyathelo lokuqala. Ngokwenyani awufuni ukuthatha inyathelo lokuqala.
Umyalezo kunye nomama wam, kwaye uya kuba yenye nje imfihlelo engasonjululwanga.
Umyalezo kunye nomama kwaye uya kufunda ukuba lithetha ntoni iBigfoot.
Sukuziphambanisa nomama, uyakukubeka emsebenzini ucoca into. Ndithetha ngamava.
Jonga, malunga nokuxakana nomama, uyiKumkanikazi yokulungisa ukungalunganga.
Into onokucinga ukuba uyaphambanisa nomama yenye nje imihla yobomi bokukhulisa abantwana kuye.
Ukuthumela umyalezo kunye nomama wam kuya kumenza azimisele ngakumbi ukuqhubeka nokwenza nantoni na awayeyenza.
Sukuthumela iziQendwana zaBantwana bam
Ayikho into eyoyikeka njengamama okhusela amathole akhe. Uninzi lwee-moms zabantu ziyoyikeka kwayeukukhusela abantwana babo.
Ukuba udlala nabantwana bam, imovie Bhabha Yoyika, yoyika kakhulu!
Ngaphambi kokuba udibanise nabantwana bam, khumbula nje ukuba kungcono uthule kwaye ucingelwe ukuba usisidenge kunokuba uthethe ususe konke ukuthandabuza.
Imiyalezo nabantwana bam kwaye uya kuzifumana ngokukhawuleza phakathi komtyholi kunye nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka.
Umyalezo kunye nabantwana bam kwaye uya kuba yinto nje: Nantsi namhlanje, ubaleka ngomso.
Oomama bacwangciswe ngempendulo enye xa udibana nabantwana babo -Uhlaselo!
Sukuthumela iziQendwana zoMyeni wam
Kuyinyani ukuba amadoda angazithatha. Nangona kunjalo, kukho amaxesha apho kuya kufuneka umise umntu ngqo malunga nokuzama ukungxola nomyeni wakho.
izihlangu ze-aerobic ngamanzi ngenkxaso ye-arch
Sukuziphambanisa nomyeni wam. Andinakukwazi ukujongana nayo nayiphi na into ayenzileyo.
Ukuba uyaxakana nomyeni wam, ndiza kufana nebhere kwindlu yezinyosi.
Ndicela ungangxoli nomyeni wam. Ndigqibile ukumfumana ngalendlela ndimthanda ngayo.
Umyeni wam yindoda enyamezelayo. Kodwa xa kuziwa ekuxakaniseni naye, andinguye omncinci.
Sukuya kunye nabafazi bam
Uninzi lwabantu abatshatileyo baya kubakhusela abafazi babo, kwaye abo baphazamisayo naye bazisole kwangoko. Abanye abantu abatshatileyo bayazi ukuba abafazi babo bayakwazi ukuzimela kwaye banokunika kuphela isilumkiso kulowo uza kuba ngumoni!
Isilumkiso endinaso kuwe xa kufikwa ekuxakaniseni nenkosikazi yam… Baleka!
Mamela imiyalelo yam malunga nokuxakana nomfazi wam- Musa!
Ukuthumela imiyalezo kunye nenkosikazi yam kufana nqwa nomthambeka omtyibilizi ongumzekeliso.
Umyalezo kunye nenkosikazi yam kwaye uyakufumanisa ukungcola okukhulu kunekhitshi kuMbulelo.
Okwantlandlolo Musa ukuhambisa iziQendwana zoSapho lwam kunokuba ziMnandi
Xa usebenzisa iikowuti zoqobo ezilumkisa abantu ukuba bangangcolisi kunye nosapho lwakho, unokuhlala ukongeza ukubamba uburharha. Isicatshulwa esimnandi sokulumkisa abantu ukuba bangangcolisi kunye nosapho lwakho kunokubathatha ngokungalindelanga kwaye banikeze indlela yokuqonda okungakumbi.
Ulutsha Luthando Ukondla Umntwana Iindidi Zesixokelelwano Irings Cheerleading Slideshows Buza Ingcali!
Ukwenza Isijwili Ukulahlwa Kwepet
Inja Ukufuya Nokukhulelwa
Indawo Yasemsebenzini Ukhuseleko Iindlela
I-Senior Fashoni Nenwele
iileta zokubhena zoncedo lwezezimali
Umama wabanxibe umyeni womtshato ongaphandle
loluphi uphawu oluhambelana kakhulu
Eyona nkonzo yokuhanjiswa kwesidlo kwiintsapho
I-kelley incwadi eluhlaza okwesibhakabhaka isikhokelo sokuqala semodeli ka-1946 ukuya ku-1986
amagama adumileyo amnyama namhlophe ekati
Ukumiselwa kweenjongo zabafundi besikolo esiphakathi pdf